I-PVC ye-PVC ye-PVC ye-25l Roll-Top-Top Ocping Orping kwinkampu | Zone
I-Waterproof Roll Roll Proppack
I-30 * 25 * i-50cm
I-1.500D PVC MVC ye-MESPROFOF
2.Geracy Roll-rop-procroones Ikhusela imixholo evela kuthuli, isanti, ubumdaka kunye namanzi
I-3.Hift frequency ye-Frequency engaqhelekanga yokutywinwa kwaye icinezela itekhnoloji
4.Umngxunya ongaphambili we
I-Stensolble Stensom kunye ne-SINSP STOPs ene-whistle buckes Gcina imitya yegxalaba yakho ekhuselekileyo, kwaye inika izandla zakho simahla
6.irgonomic, iDedabible kwaye uyilo lokubuyela umva; I-pads eguqukayo ye-pads ene-dried ring gear
7.A ye-mesh mesh placket kwelinye icala lebhotile yamanzi;
I-8.Shishino loNcinci leNtengiso inamanqanaba aphezulu ovavanyo lwamanzi, ubungqina bamanzi bokubhukuda ngaphandle kwexhala.
Ilungele ukuntywila, i-surf i-surf, ibhukuda kunye nenye imisebenzi ye-hydrophilous, inkampu yangaphandle
I-1.Q: Ngaba uyayivavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuhanjiswa?
A: Ewe, sivavanya ngokupheleleyo yonke into ngaphambi kokuhanjiswa.
2.Q: Yintoni i-MOQ kumdlalo wezoda?
A: I-1000 ye-PCS moq kwimigca yefowuni yamanzi, i-500 i-PCS Moq ukuya kwi-Backpacks umgca mbom kunye ne-500 ye-PCS Moq kwiingxowa zempahla okanye enye isixhobo sangaphandle. Ngeli xesha, owona mlinganiso weendleko ophezulu uqinisekisiwe, kwaye akukho zindleko zongezelelweyo ziya kuhlawuliswa kwi-surcharges yempahla enokuqhuba iindleko zonke.
3.Q: Ungawukhusela njani uyilo lwam kunye nophawu lwam?
I-A: Ulwazi oluyimfihlo aluyi kuchazwa, luveliswe ngokutsha, okanye ukusasazwa nangayiphi na indlela, sinokutyikitya imvumelwano kunye neMidlalo ye-Uzone kunye neMidlalo ye-Uzone ijolise ekwakheni inkqubo emigangathweni yeshishini, njengokuhlonela uMoya wemvumelwano , Imfihlo yabathengi, ip, kunye nezinye izinto zabucala njl.
4.6. IQela loLawulo: Yonke i-Aumanejala iphumelele imfundo elungileyo, i-bachelor kunye nephezulu. Kwaye iQela loLawulo linamava acebileyo kunye nesikhundla kwiinkampani ezaziwayo.